INGELOSI INANI 666 AYISIYIYO LE UYICINGAYO! - INANI
Ingelosi Inombolo 666 ASIYONA nto ucinga ngayo! Intsingiselo yokomoya + Uphawu
Eyona / Inani
Malunga neenombolo zeengelosi
Ukuba ubusoloko ubona uthotho lwamanani aphindaphindwayo kuyo yonke indawo, awuzukuphambana, kwaye ayisiyonto ilandelelanayo leyo! Thatha oku njengoMqondiso woqobo kwiingelosi zakho, izikhokelo zomoya kunye noMhlaba kwaye bazama ukufumana ingqalelo kwezi zikhokelo kunye nemiyalezo. La manani aphindaphindiweyo anokuvela njengexesha, kwipleyiti yelayisensi, uphawu lwendlela, inombolo yefowuni, itotali efanele ukufunyanwa, ubungakanani befayile kwikhompyuter yakho, inani lezaziso onazo kwi-Instagram, kwaye uluhlu luyaqhubeka ! Umhlaba wonke uya kuyithumela le miyalezo kuwe nangayiphi na indlela eyimfuneko! Thatha oku njenge uphawu ukwindlela elungileyo, imithandazo yakho iviwe, kwaye usiya kwicala elifanelekileyo. Inani ngalinye lineentsingiselo ezahlukeneyo, ngakumbi xa inani elinye liphindaphinda amaxesha ngamaxesha.
INTSINGISELO YANGOKUTSHELA KWAMA-666
Usenokuba ulibonile eli nani kwaye ngokuzenzekelayo ucinga ukuba luphawu lwedemoni embi okanye uMtyholi / uSathana / uMchasi-Kristu / uMubi, nantoni na ombiza ngayo / yona… isondele kuwe! Sukoyika! Eli nani lingaqondwa kakuhle, ikakhulu kwiifilimu ezoyikisayo kunye nenkcubeko ye-pop, kodwa ndilapha ukucoca umoya kube kanye!
Omnye wemiyalezo ebaluleke kakhulu emva kwe-666 kukwazi iingcinga zakho- ngakumbi, ezihambisa ukungcangcazela koloyiko, uloyiko, unxunguphalo, okanye ukugxila kakhulu kwimicimbi yemali efana nezemali, kunye nokuthenga izinto ucinga ukuba kuzakusenza sonwabe , umzekelo. Ngamanye amaxesha iimeko, abantu kunye nezinto zinokusenza sizive ngale ndlela kwaye kunokuba ngumceli mngeni omkhulu ukuhlala siqinisekile. Ngaba ukhe wazibhaqa ucinga ngezona meko zimbi? Iingcamango zethu zithwala amandla njengombane okhanyayo othunyelwe kwi-Universe (elungileyo okanye embi) kwaye ezo ngcinga zithunyelwa kuthi. Guqula ukugxila kwakho kwiingcinga zezinto ozifunayo. Ngcono nangoku, cela iingelosi, indalo iphela, Umthombo ukuba yintoni na uloyiko lwakho kwaye ufuna uncedo lwabo ukufumana isisombululo kunye nokukunceda ukuba ucinge iingcinga ezilungileyo. Xa sinikezela kuloyiko kwaye sivumele i-ego yethu ithathe indawo kunokuhlala kwinyani yethu ephezulu eluthando noxolo, ingqondo yethu, umzimba, kunye nomoya zikhutshiwe kulungelelwaniso lokuhamba kwe-Universal. Ukongeza, xa sikhathazeka kwaye sihlala kuloyiko ebomini bethu kufana nokubeka isithintelo ekufumaneni iintsikelelo ezivela kwindalo iphela, ngokuchasene nokucinga kunye nokuziva iingcinga zothando, uxolo, imvisiswano, ukuhamba, kunye nokuthembela kwindalo iphela.
Yintoni yokusela i-asidi ye-asidi
Umyalezo u-666 ucela ukuba uhlengahlengise iingcinga zakho kuthando ngakumbi, oluya kuphakamisa ukungcangcazela kwakho kwiziphumo ezilungileyo! Ukubona eli nani kukuncedwa kancinci kwindalo iphela ukuze ube nokholo lokuba iimfuno zakho ziya kuhlala zihlangatyezwa. Ngamanye amaxesha kulula ukutsho kunokuba ukwenzile ‘tshintsha nje iingcinga zakho,’ ngakumbi ukuba kudala sityhubela amaxesha anzima. Unokucinga ngokuthatha uhambo: ngamanzi, kwindawo ethile kwindalo, umthambo, zama i-yoga okanye ukucamngca, uthathe ibhafu yokuphumla, umamele ingoma eyonwabileyo, wenze uluhlu lwezinto onombulelo ngazo, zama ukuzithandela, yenza into entle kwabanye, zama i-aromatherapy okanye iseshoni ye-reiki ngengcali eqinisekisiweyo… (mhmmm ndiyayazi enye, ah hemm, me!;))
Umhlaba wonke uhlala ukuxhasa, kodwa kuqala, kufuneka sicele uncedo lweengelosi kwaye kufuneka uzimisele ukumamela! Yithemba intu yakho, vula intliziyo yakho, kwaye uvuleleke ekwamkeleni imimangaliso kunye nazo zonke izinto ezintle ebomini. Ngenxa yokuba kufanelekile!
inombolo engu-666 intsingiselo
sisifo se-lymph node esidumbileyo
ndihlala ndibona i-444
kukhuselekile ukutya ikhephu
eyona ndawo yokulungisa iinwele ezomileyo
I-frankie kunye neGrace entsha ye2019